သူမ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » သူမ
Posted by water-melon on Feb 24, 2012 in My Dear Diary | 43 comments
သူမ ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းတော့ ဂန္တ၀င်အောင်ဖွဲ့ဆိုပါရစေ။
သူမ က ကျွန်တော့်အသက်၊ကျွန်တော့် အချစ်ဦးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
သူမ ကို ရတနာပုံတက္ကသိုဟ်ကျောင်းစတက်တဲ့နေ့မှာ ကိုယ့်မေဂျာ၊ကိုယ့်အခန်းမှာဘဲ စတွေ့ခဲ့တယ်။
သဘောဖြူတဲ့တိုင်းရင်းသူလေးပီပီ စကားလေးဝဲတဲတဲအသံလေးက ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာစွဲညှိခဲ့တယ်။
ပန်းဆီရောင်သမ်းနေတဲ့ သူ့ပါးလေးကို နမ်းခွင့်ရရင်သေပျော်ပါပြီလို့ အိပ်မက်ထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်ဖွင့်ပြောနေမိတယ်။
သူမကို ချစ်တယ်လို့ဖွင့်မပြောရက်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူမစိတ်ထိခိုက်ပြီး ပျော်ရွှင်နေတဲ့အပြုံးလေးညှိုးငယ်သွားမှာကို ကြောက်မိလို့ပါ။
ကိုယ်တိုင်လည်း မခူးရက် တစ်ခြားသူခူးမှာကိုလည်း တွေးကြောက်မိတယ်။
သူမ ကို အရမ်းချစ်မိနေလို့ပေါ့။
တစ်နေ့တော့ သူမ နဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်ရတယ်။ အပျော်ရွှင်ဆုံးနေ့လေး တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
စကားတွေလည်း ပြောဖြစ်တယ်။ ဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေက ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယမြို့နယ်ထဲက ရွာလေးတစ်ရွာ။ မိသားစု ၃ ယောက်ရှိသည့်အနက် အငယ်ဆုံး၊အထွေးဆုံးမို့ မိဘတွေက အလိုလိုက်ထားတော့ တောင်ကြီးတက္ကသိုဟ်မှာမတက်ဘဲ မန်းလေးရတနာပုံတက္ကသိုဟ်မှာ လာတက်တဲ့ ပင်းတယက ဓနုသူလေး။
မန်းလေးမှာ အသိမရှိပေမဲ့ မန်းလေးကို ချစ်မြတ်နိုးလို့ကျောင်းလာတက်တာပါတဲ့။ ကျွန်တော်စိတ်ထဲက မေးလိုက်ချင်တယ် မန်းလေးသားတွေကိုရော မမြတ်နိုးဘူးလားလို့။အဆောင်ကတော့ မိန်းထဲက အဆောင်တစ်ဆောင်မှာနေပါတယ်။
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ သူမကို ချစ်တဲ့စိတ်တွေ များသထက်များ၊စိတ်ထဲရင်ထဲလဲ သိမ်းဆည်းတာတွေများနေတော့ ကျွန်တော်လည်း နောက်ဆုံးအရဲစွန့်ပြီး
တစ်နေ့သောနေ့ ကန်တင်းမှာ သူမကို စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ပြောမိပါတယ်။
သူမ ရဲ့ ပန်းဆီရောင်သမ်းတဲ့ မျက်နှာလေး ရှက်သွေးဖြာသွားတယ်။ သူမ ကျွန်တော်ကို ပြောခဲ့တယ်
စဉ်းစားပါရစေတဲ့။ ကျွန်တော် သူမဆီက ဒီလိုစကားကြားရတာကိုက ကျွန်တော့်မှာ အင်အားတစ်ရပ်လို ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် သူမကို အမြတ်နိုးဆုံးဆိုက်ကြည့်ပြီး စောင့်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဲဒီနေ့လေးက ကျွန်တော်ရဲ့ ဒုတိယကြိမ် ပျော်ရွှင်ခြင်းပါ။ ညကျတော့ သူမရှိရာ အဆောင်ကို ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့သွားခဲ့တယ်။ နှစ်ယောက်သား ကျုံးဘေးမှာ အတူတူလမ်းလျှောက်ပြီး ကျုံးဘေးက အအေးဆိုင်မှာ ထိုင်ပြီး စကားပြောဖြစ်သေးတယ်။ ကျွန်တော် သူမနဲ့ရှိတဲ့ အချိန်လေးနည်းနည်းများများ
သူမကို ပျော်ရွှင်အောင်၊စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားချင်တယ်။ ကျွန်တော် သူများတွေလို ငွေမတတ်နိုင်ပေမဲ့
သူမကို နွေးထွေးတဲ့ အကြင်နာမေတ္တာချစ်ခြင်းတွေ အကုန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့သူမနဲ့ ကျွန်တော် ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူမဆီက ကျွန်တော်လိုချင်တောင့်တနေတဲ့ ပန်းဆီရောင်ပါးလေးကို နမ်းရှိုက်ခွင့်ရတယ်။ အသက်ထက်ဆုံး အတူတူချစ်မယ်လို့ တောင်ပေါ်က ရွှေပြောင်ပြောင်ဘုရားမှာလည်း တိုင်တည်ဖူးပါတယ်။ သူမနဲ့အတူတူလည်ခဲ့ဘူးတဲ့ နေရာတွေဟာ အခုထိ အငွေ့အသက်လေးတွေရနေတုန်းပါ။ သူမနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တာ သုံးနှစ်ပြည့်တော့ ကျောင်းကြီးလည်းပိတ်ပြီ။
သူမလည်း အချိန်တန်တော့ အိမ်ကိုပြန်ရတာပေါ့။ သူမနဲ့ မပြန်ခင် ဗောဓိကုန်းဘုရားထဲမှာ တွေ့ကြသေးတယ်။ သူမရဲ့ မျက်ဝန်းအိမ်လှလှလေးထဲကနေ မုတ်ကောင်ထဲက ထွက်လာတဲ့ ပုလဲလုံးလေးများလို မျက်ရည်တွေ အလုအယက်ကျဆင်းလာတယ်။ သူမ ငိုတော့ ကျွန်တော်လဲ စိတ်ထဲမှာ ၀မ်းနည်းလာတယ်။ ငိုချင်သလိုဖြစ်လာပေမဲ့ ယောက်ျားလေးတန်မဲ့ငိုရင် မကောင်းတာကြောင့် ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေကို ထိန်းလိုက်တယ်။ သူမက “မောင်” ကို မခွဲနိုင်ဘူးတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း သူမကို မခွဲနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီညတစ်ညလုံး
သူမဘေးနားမှာရှိနေခဲ့တယ်။ နောက်နေ့မနက်မှာ ကားဂိတ်ကို လိုက်ပို့ပေးတော့ စိတ်ထဲမှာ စို့တက်လာတယ်။ သူမ ကားပေါ်မှာ မျက်ရည်လေးစို့ပြီး လက်ပြနှုတ်ဆက်နေတာကို ဒီနေ့တိုင်မြင်မိဆဲပါ။
ကားလဲထွက် သူမရဲ့ ပုံရိပ်ကလည်း ကျွန်တော့ဘေးနားက ရေးတေးတေးပျောက်ဆုံးသွားတော့
ခိုကိုးရာမဲ့သွားတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ကားဂိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော်ငိုမိတယ်။
အခုဆို သူမနဲ့မတွေ့ရတာ တော်တော်ကြာနေပြီ အလွမ်းပြေ ဖုန်းနဲ့ပဲပြောနေရတယ်။ သူမက လာတောင်းပါတော့လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် သူမကို မလိုချင်ဘဲ နေပါ့မလား။ သူမက ကျွန်တော့်အမြတ်နိုးဆုံး မိန်းကလေးလေ။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် အလုပ်ကြိုးစားပြီးမှ လာတောင်းမယ်လို့။သူ့တစ်ပါး သားသမီးကို မပြည့်စုံဘဲနဲ့တော့ ကျွန်တော်မယူချင်ဘူး။ ကျွန်တော် သူမကိုတင့်တောင်းတင့်တယ် လာတောင်းမယ်လို့ ဆန္ဒပြုခဲ့တယ်။
အခုဆို သူမရဲ့ ဖုန်းသံလေးမကြားရတာတော်တော်ကြာပြီ သူမ နေမကောင်းလို့လား။ ဘာများဖြစ်နေလို့လဲ ဆိုပြီး စိုးရိမ်ခဲ့ရတဲ့နေ့တွေများလွန်းနေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ နာရီစက္ကန့်မိနစ်၊ရက်လနှစ်တွေကြာလာတော့ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်ပိုင်အလုပ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့အထိ သူမကို မေ့လို့မရသေးပါ။ သူမကရော ကျွန်တော်ကို မေ့နေပြီလား။ သူမကို ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီ၊သူမကို တင့်တောင်းတင့်တယ်နဲ့ လာတောင်းနိုင်ပြီလို့ပြောပြချင်တယ်။ အခုတော့ သူမ ဘယ်ဆီကို ရောက်လို့နေမှန်းမသိတော့ပါ။
ဒါပေမဲ့ ဖူးစားစစ်မှန်ရင်တော့ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်ဆုံနိုင်မယ်လို့ အားတင်းထားရင်း………..။
မျက်ဝန်းမှာ တွဲခိုတဲ့ အလွမ်းတွေ
တမ်းတခြင်း အပူရှိန်မှာ အငွေ့ပြန်လို့
ကျွန်တော် ထပ်တူခံစားမိပါတယ် ခင်ဗျားဆုံပါစေဗျာ
နာတို့သူမကို သွားရှာကြမယ်..
လတ်စ်ဂိုး..ထူ သူမ နေရာ..
သဂျီးစီက လမ်းစရိတ်၊ကြိုတင်ပွိုင့် ဒေါ်လှတစ်ပုံးလောက် ချေးလိုက်ပါ..
စိန်ပေါက်ရေ သူဂျီးက အိပ်တုန်းထင်တယ်
ရပါတယ် လေးပေါက်ဆီက ခဏငှားလိုက်မယ်
သူမကို ပြန်တွေ့မှ ပြန်ဆပ်တာပေါ့
အဲဒီ သူမကို ကိုပေသိတယ်လေ
ဆာမိရှိလုပ်စားချင်တဲ့သူနဲ့ ဦးကြောင်ဆီပြန်ပို့ခိုင်းတဲ့သူနဲ့ ရှုပ်နေတာပဲ
ကောင်မလေးကလာခိုးမှာကိုစောင့်နေတာလားဟင် ? ?
လက်စသတ်တော့ ညည်းက “သမ” ကို ချစ်နေတာကိုး ……….
ဖတ်လတ် ဖတ်လတ် (Tag ထားတဲ့ First Love ကို ငပိသံနဲ့ ထွက်လိုက်တာနော် :P) နဲ့ တစ်နေ့က ပင်းတယ ပုံတွေ တက်လာတာ သမ ဆီသွားပြီး လျှောက်လွာတင်တာနေမှာ ခုတော့ ..သိပြီ….သူ့ကို …. သူချစ်သည်။
ပင်းတယသွားတာက သူငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်ပါ အစ်ကိုစိန်သော့
ခုထိ ဖုန်းလည်းဆက်လို့မရ လူကြုံပါးလည်းမရလို့
မနေ.ကပဲ ပန်းဆိုးတန်းဂုံးကျော်ပေါ်ကခုန်ချမလို.လုပ်တုန်းအတင်းဆွဲထားရတဲ.သူက ..
သူမ များဖြစ်နေမလား …………….???
ဒို.ကိုပြောတာလား ဖရဲရယ် ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး တစ်မျိုးကြီးပဲ… ဒို. ဒီလကုန်ရင် သူ.ဆီပြန်လာမှာပါ…နော်.
အဟီး … ဖြဲသီးမှာလည်း ဒီလို ဇာတ်လမ်းလေးရှိခဲ့ဖူးတာကိုး … ။
ဒီခေတ်က ဖူးစာခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး ဖြဲသီးရဲ့ ဦးရာခေတ်ဟဲ့ ….. ။
အကြောင်းမဲ့ အဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုကတည်းက … ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူး … တကယ်ချစ်ရိုးမှန်လျှင် .. တစ်ဖက်ဖက်က ဆက်သွယ်ဖို့ .. ကြိုးစားသင့်တာလေ .. ဘယ်နှယ့် လတွေနှစ်တွေချည်ပြီး ကွဲကွာခဲ့တဲ့ ချစ်သူက …. ကိုယ့်ကို လာခေါ်မယ် မလာခေါ်ဘူး မရေရာတဲ့ လူကို ထိုင်စောင့်နေပါ့မလားဟယ် …. ။
တကယ်မမေ့နိုင်သေးလျှင်တော့ … လက်ရှိ သူ့အခြေနေကို စုံစမ်းပြီး .. အဆက်သွယ်ရဖို့ ကြိုးစားသင့်တယ် … တစ်မြေတည်းနေပြီး … အဆက်သွယ်ပြတ်သွားတာကတော့ လုံးဝမဖြစ်သင့်တာပါပဲ … ။
ပြောလိုက်ချမ်းဘာ အဲဒိ ငခြောက်မကို
မျှော်နေလို့ ကတော့ အပိုဘဲ..
တောင်းမနေနဲ့ ( ကြာလို့ ) တစ်ခါထဲ ရန်ကုန်ကို ခိုးလာခဲ့
နောက်နေတာ မဟုတ်ဘူးနော် ဆရာ
အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောင်တ လုံးဝ မရစေနဲ့
ပြောနေ ကြာတယ် အခုထ သွားတော့……..
တကယ်ချစ်တယ် လဲ ပြောသေး
ဂယ်လား … ဂယ်လား ….
ဖျဲသီး တီယောက်ထဲ မီဟုတ်ဘူးနော်…
ညာ ရ၀ူးနော် …
လာပါ ဆရာဂီ ရယ်
ဆရာ့အတွက် ဆိုရင်တော့ စီစီတီဗီ တပ်ထားတဲ့ အခန်းမှာ ထားဘို့ စီစဉ်ပေးထားပါမယ်
အခုပဲ ပေါက်ဖော် ကလှမ်းပြောတယ် ရိုက်ကူးရေး ဖြန့်ချီရေး သူတာဝန်ယူမယ် ဆိုပဲ
Yes, I also will help you for Ko Gi,
I can provide CCTV, all communication to get Internet access.( only for Ko Gi )
Which one you want to use, Wireless or cable internet?
Here, Qatar, the government is starting upgrading of Internet ( 10 GB band width) as part of the preparation 2022 FIFA world cup.
Dear brother, Ko Gi,
Now we are ready, Let’s start your show.
စိတ်မကောင်းပါဘူး မဖရဲရယ် ။
မှီရာကားနဲ့ ဒီနေ့ပဲ လိုက်သွားလိုက်ပါ။ ဟိုမှာ တောင်းရမ်းလက်ထပ်ယူပါ့မယ် ဆိုပြီး နားပူနားဆာလုပ်သူတွေ ၀ိုင်းနေပါပြီတဲ့။
ဖြဲသီး …… သူမနဲ့ အမြန်ဆုံး ပြန်တွေ့နိုင်ပါစေ ……..
များကို မပြောဘဲထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုး..
ခုမှပေါ်တယ်..များက လူလွတ်ဆို တာကိုယုံနေတာ..
ခုတော့..ဟင့် များအတဲလေး ကွဲဘီ…
ဂီ ရယ်.. ကယ်ပါအုံး….
ဖျဲသီးရေ့..ဖျဲသီးရေ့ ( အမောတကော ပြေးလာပြောသံ)
ရွာအပေါ်ပိုင်းမှာ မှောင့်ကို လိုက်ရှာနေတယ်ဝေ့…
ရွာသူရွာသားအားလုံး ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဝတ္ထုကိုအားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ သူမဆိုတာ အပြင်မှာ တကယ်မရှိပါဘူး၊ ကျွန်တော်ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်ကမ္ဘာထဲက ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာအောင် ကျွန်တော် အချိန်ကြာကြာတွေးပြီးမှ ရေးထားတာပါ။
မီးထိုးပြီး ဒါ့ပုံ လာရိုက်လှည့်မယ်
အမလေး TITAN ရယ်
ဖြဲဒီး ဖြဲဒီး ဖြဲဒီး ဖြဲဒီး (အမြန်ဖတ်ပါ)
အရင်လို လယ်ကွက်ထဲပါတုန်းကတော့ ပုံထွက်ကောင်းတယ်
ပန်းရောင်သမ်းနေတဲ့ သူ့ပါးလေး နမ်းရရင် သေပျော်ပါပြီဆို …
အခုမှ လွမ်းတတ်နေသေးတယ် ..
သွား .. လူချိုး .. ရေလည်း ချိုးဘူး …
ရေးထားတာလေးက အရမ်းလန်းတယ် ဖရဲရေ …
ထပ်လည်း ရေးဦးနော် …
အသည်းကွဲ ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်သွားပါတယ်။
ဇော်ဝင်းထဋ်ရဲ့ အသည်းကွဲအနမ်း သီချင်းကို သတိရမိတယ်ဗျာ။
ငါ့ကို ချစ်ရင် မနမ်းပါနဲ့
ငါ့ကို ချစ်ရင် မနမ်းပါနဲ့…။
မမ = မြန်မားမီးရထား..
အိပ်ချင်မူးတူး.. ၂ နာရီခန့် ကြောင်တောင်တောင်ဖြင်.မန်.
ဖရဲသီး ………. သူမနဲ့ မြန်မြန် ဆုံဆည်းနိုင်ပါစေ
အမလေး ဘယ်သူတွေ လက်ကမြည်းတာလဲ
၀တ္ထုလေးက တကယ်ခံစားရပါတယ် ဖရဲသီးရယ်။
အော်..ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဆိုက်ကြည့် ကို (စိုက်ကြည့်)ကို ပြင်လိုက်ပါလားဟင်။
(Ma Ma တို့အဖွဲ့ဝင်လျှောက်လွှာတင်ရန် ကြိုးစားနေခြင်း)..
အဲ့လာ မ-မာ-မိုး-မွန်-မတ်-ကင်း အဖွဲ့ က စတုတ္ထဂိုဏ်းချုပ်ကွဲ့ 
သူ မရင် ငါ ထိုင်နေယုံပေါ့ကွာ….
ဖူးစာတွေ နဖူးမှာ တွေ လုပ်မနေနဲ့ ညီငယ်
အချိန်ရှိခိုက်လုံ့ လစိုက် ပေတော့ မောင်
အိုင်တီခေတ် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း စသဖြင့် မည်ပေါင်းစုံပြောင်း အီခေတ်ကြီးတွင်
တွံ သင်သည် ဟိုစကားလို
“ လက်နှေးက ခွက်ဆေး ”
ဖြစ်မှာ အကိုမောင် စိုးမိသည် ။
တစ်ယောက်ကလည်း သို့/ ကို……….. တဲ့
နောက်တစ်ယောက်ကလည်း သူမ…… တဲ့
အင်းးးးးး အချိတ်အဆက်ကို မိနေတော့တာပဲ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သတ်ပုံမှားလို့တော့ မရဘူး။ ;)
မွန်မွန်ရေ- တို့တစ်တွေရဲ့ ဂိုဏ်းကြီးတောင့်တင်းခိုင်မာ ကောင်းမွန်လာလို့ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း ….
တကယ်ဆိုရင်တော့ စောင့်မနေနဲ့ လိုက်သာသွားတော့ ကို့ညီရေ..
ဒါနဲ့ “စိတ်ကူးရင် ကမ္ဘာသို့ အတွေးနယ်ချဲ့၍.. ” ဆိုတာ ရင်ဘတ် ကိုညွှန်းတာပေါ့.နော်
မဟုတ်ရင်တော့ ယဉ် ရမယ်ထင်…
ငွေရှာရင်း အနေကြာတော့ မစောင့်နိုင်သူက သူများနောက်ပါသွားပါလေရော..
မင်္ဂလာဆောင်ရင် ဂေဇက် ရွာသူရွာသား တွေအာူလုံးပျော်ပျော်ကြီးလက်ဖွဲ့ကြမှာပါ…